'Suura oofee akkan daa'ima hatame ta'uu ifa taasise' - BBC News Afaan Oromoo
'Suura oofee akkan daa'ima hatame ta'uu ifa taasise'
Baatii Ebla bara 1997 ture dubartiin uffata narsii uffattee tokko daa'ima dhalattee guyyaa sadii tokko kutaa hospitaalaa Keeppi Taawoon keessa wayita haati deesse rafaa jirtu kan fudhattee baate.
Akka carraa ta'ee garuu waggoota 17 booda mucaan hatamte sun kan eenyummaashee isa dhugaa barte.
Guyyaansaa guyyaa jalqabaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Magaalaa Keeppi taawooniifi Miché Solamoniif ammoo waggaa dhumaa ture. '
Waggaadhuma sana baatii Amajjii 2005 keessa Michen waggaa 17 barattoota biraatiin marfamaa waa'ee barattuu biraa Cassidy Nurse kan waggaa sadiin ishee gadiifi gara malee ishee fakkaattuu itti himuu eegalan.
Micheen garuu jalqabarratti baayyee waa'ee dhimma kanaa hin yaadne turte.
Muuziyemiin suuraa 'ofee' banamuuf
Dubartiin waggoota 32 dura butamte gadhiifamte
Garuu booda wayita shammarran lamaan wal arganiitti miira kana dura itti dhagahamee hin beekne akka itti dhagahame dubbatti Micheen.
''Akkuman waan kana dura ishee beekuutti natti dhagahame,'' jetti. ''Maaliif mirri akkasii akka natti dhagahameelleen hubachuu hin dandeenye ture.''
Garaa garummaa umuriitiin alattis Micheefi Casiidy yeroosaanii baayyee waliin dabarsii eegalan.
''Anis mucaa xiqqoo attam jirataan jedhaan. Isheenis obboleettii angafaa attam naan jetti turte!'' Micheen. ''Yeroo tokko tokkos ishee waliin mana dhiqannaa galla ture. 'Mee riifeensa keen siif sirreessa, anuu si babareecha naan jetti.''
Madda suuraa, Mpho Lakaje
Miché Solamon harra
Yoo namoonni isiin obbolaadhaa jedhanii gaafataniin 'lakkii hin beeknu, tarii addunyaa gara biraatti' jechuun qoosaa turan.
Achuun guyyaa tokko dubartoonni lamaan waliin ofee ka'uun hirriyyota isaaniitti agarsiisan.
Namoonni muraasni Micheen yoo guddafamtee ta'e gaafataniin. Isheenis Lakkii! Lakkii hin maraatiina! jechuun deebiisaafi jirtu.
Micheefi Cassidy ammoo suuraasaanii fuudhanii galuun maatiisaanitti agarsiisu eegalan. Lavona haati Michee kan intala isheetiin ''Giiftii'' jechuun waamtus gara lafa filmii itti doowwataniitti geessuun akka dubartoonni lamaan wal fakkaatan itti himte.
Mikaa'e abbaan Miche ammoo akka hirriyaa intalasaanii beeke dubbate. Kunis abbaan Cassidy suuqii meshaa elekitoniksii waan qabaniif yeroo ta'e achii bitusaa hime.
Garuu maatiin Cassidy Silesteefi Mornee Nurse suuraa intalasheefi hirriyaashee yeroo dheeraaf irratti ija baasuun turte.
Achinis Michee gaafii gaafatan akka qaban Cassidy'tti himan. Wayita wal arganittis isheenis ''Ebla 30, 1997'tti dhalattee? jechuun gaafatte.
"Anis akkasiin jedheen, 'Maaliif? Maal feesbuukii irratti na adamsuu barbaaddee?'' jetteen Micheen.
Hiriyaan ishees beekumaaf akka barbaaddee Micheetti himte. Achinis Micheen eeyyeen Ebla 30, 1997 dhaladhee jetteen.
Torban darbe, Michee osoo hin eegamiin waajira daarektara mana barnootaatiin kutaa eerreegaa irraa waamamte.
Isaan boodas waa'ee mucaa umurii guyyaa sadii Zephaany Nurse jedhamtuufi Hospitaala Groote Schuur kan Keeppi Taawon keessaa waggaa 17 dura hatamuun gonkumaa hin argaminii itti himan.
Micheen seenicha dhaggeeffatee garuu maaliif akka itti himame hin hubannee ture. Hojjataan hawaasaas intalli sun Michee ta'uu akka dandeessuu ragaan jiraachusaa eere.
Dubbicha gabaabsuuf jecha Micheen hospitaala Groote Schuur keessatti akka hin dhalatiin, kan dhallatte hospitaala Retreat jedhamu keessatti ta'uu dubbatte.
Kana turees akkan waraqaa ragaa dhalootaashee irra ture jette. Garuu hojjataan hawaasummaa achiitti dhallachuusheetiif ragaan akka hin jrree hime.
Lavona Solamon suuraa manatti Miche reeffu dhalattee waliin kaateedha
Micheen wanti ta'aa jiru dogongora ta'uu yaada garuu qorannoo DNA'tiif tole jette.
"Haadha na guddifterratti amantaa cimaan qaba. Gonkumaa akka na hin sobne nan amana. Keessattuu eenyuu akkan ta'eefi eessa akkan dhufeerratti,'' jetti Micheen.
Kanaafuu, qorannoon DNA faallaa akka ta'u amataan qaba ture jetti.
Haata'u malee, haalli akka isheen abdatteen hin taane. Guyyaa itti aanu bu'aa qorannoo qaqabee Micheen mucaa guyyaa sadiitti hospitaalaa hatamte Zephany Nurse ta'ushe mirkannesse.
''Anis naasuun achumatti hafe. Jireenyi kiyyas to'annoo kiyyaan ala ta'e,'' jetti.
Dubbiin intala guyyaa sadiitti dhalattee amma waggoota 20 booda ragamte kunis mata duree gaazexoota Afriikaa Kibbaa ta'e. Jireeny Michees haala hinyaadamiin jijjirame.
Tarii gara manaatti deebii'uu akka hin dandeenye itti himame.
Waggaa 18 guutuuf ganaa maatii sadiitu hafa ture. Wayita sanatti murte mataashee taasisuu dandeessi, amma sanatti garuu achuma turuun akka qabaattu itti himame.
Wayita kanas Michee odeeffanoo caalaa gaddisisaa dhaggeesse. Lavonaa Salamoon, dubartiin akka haadhasheetti amantee harkasheetti guddatte to'annoo jala olfamte.
''Haalli kuni caalaa hamlee koo cabse. Ishee arguun barbaadeen. Maaliif akka raawwatteefi maal akka umamee gaafachuus nan barbaade,'' jetti.
Michee wayita umurii baatii saddeetii Mikaa'el waliin
Namni akka abbaa Micheetti dhiyaate kunis poolisiirraa gaaffiin dhiyaateefiira.
"Ijaraa keessa yoon milladhuu dhiphinaafi soodaa jiruu yoo argu caalaa dhiiphadhe,'' jetti Micheen.
Poolisiinis yoo hanna raawwatame keessaa harka qabaate baru barbaadan. ''Abbaan kiyya garuu baayyee lallaafaafi nama gaarii ture. Abbaafi goota kiyya,'' jetti Micheen.
Innis ''Lakkii ani kana hinraawwadhu, Micheen intala tiyya. Attamiin kan kiyya hintaane? Anis kana keessaa harka hinqabu,'' jedhee.
Polisiinis Mikaa'eel Salamoon akka warra dhugaa jala hatamte akka hinbveekne adda baasan gadhiisan.
Mikaa'el Lavonaa ulfa akka turte beeka ture. Isheenis ulfa irra bahee ture akka waan mucaa godhattee fakkeessuun hospitaalaa hatuun Zephany Nurse manatti fiddee.
Amma Lavona Salamoon mana hidhaatti geeffamte sobaan haadha fakkachuufi daa'ima namaa humnaan hatuun himatamuuf eegataa jirti.
Madda suuraa, Huisgenoot/Noncedo Mathibela
Celeste Nurse (mirgaa) fi intalashee lammaaffaa Cassidy waliin
Celeste and Morne Nurse ijoollee biraa sadii godhatan illeen mucaasaanii jalaa hatamte Zephany barbaachu dhaabanii hinbeekan ture. Bara baraanis guyyaa dhalootashee ni kabaju ture, erga wali hiikanii boodalleen. .
Intalli isaanii hatamte garuu ollaadhumatti gudataa turte. Manni Salamoon kan Nurse irraa km 5 qofaa fagaata.
Micheenis naannoodhuma sanatti burraaqaa guddatte. Amma Micheen maatii ishee dhugaan waliitti makkamte.
''Isaanis ofitti na hammachuun boo'uu eegalan,'' jetti. garuu baayyee gammadduu hinturre.
''Waan harka isaniitti hingudatiiniifu waanan isaan yaadu natti hinfakkaannee ture.'' Micheen dhiphiina miiraa keessa galte.
Bara 2016'tti dubartiin daa'ima guyyaa sadii hatuun akka ilmoosheetti guddiftes hidhaa waggaa 10 itti murtaa'e.
Abbaa dhugaa Zephany Mr Morne Nurse wayita mana murtiititi bahaa tureetti
baruma sana Micheen haadha guddiftee mana hiidhaatte gaaffate. ''Anis yoo uffata hidhamtootaa waliin argu amman ofi to'achu dadhabuuttan boo'ee,'' jetti Micheen.
Dhugaa baruuf wayita gaafatuuttis guyyaa tokkoon sitti hima jetteen. Wayita kanattis akka raawwatte shakkuu eegalte.
"Dhiifama gochuunis qalbii namaa fayyisa. Jireenyi itti fufuu qabaata,'' jetti Micheen. Haati na guddiftees erga dhugaasaa natti himteen booda akkan dhiifama taasiseefi ammalleen ishee jaaladhu waan hubattees nageenyan argadhe.
Isheenis yeroo tokko tokko maatii isheen jaallattuufi ishee haala gaariin guddisan irra fudhachu saaniif maatii dhugaashee jibbaa akka turte dubbatti.
Mikaa'el intal Michee baatee Lanovaa man hidhaatti gaaffachuuf wayita deemaa turetti
Micheen ammalleen haadha ishee guddifte mana hidhaati dhaquun gaafataa jirti. Ijoolle lama godhatulleen jaalali isheef qabdu fageenya km 120 konkolaachisuun gaafachuunirraa hindhorkine.
Micheen amma Laavolaan hiikamuuf waggaa jaha qofatu hafa. Ammas mana maatii shee jiraachaa deebiite galuu haadhashee eegataa jirti.
Micheen maqaadhuma warra guddiseen waamamu itti fufuu filattee. Amma eenyummaa ishee dhugaa hubachuu tasgabiin jiraachu kan eeegalte fakkaatti.
"Jalqabarratti Zephany kanan jebbee natti fakkaata," jetti Miché. Isheetu rakkinaafi balaa sanaaf maatii lamaan dararee jettee yaadi turte.
Haa ta'u malee Zephany ishee dhugaa Miché jedhamtuudha. Intala waggaa 17 sobamaa jiraatte amma garuu lamaanu wal madaalchisuun jiraataa jirtuudha.
Isheenis 'maqaa lamaaniinu na waamu dandeessu. Natti tola,'' jetti.
Seenaan ofee kunoo dhugaa waggoota 17'f dhokatee ture ifatti baasuun, maatii gaddaan qalbiin cabe boqachisee.
Muuziyeemiin Veenaatti banamuuf jiru kun suuraa 'ofee' dargaggoota hawwachuu kaayyefateera
Dubartiin Arjentiinaa bara 1980n keessa butamte Boliiviyaatti gadhiisisuun danda'ameera
Viidiyoo, Biyya na jaalatu barbaadaan jira
Biil Geetis qorannoon kachachaluu irratti gaggeeffamaa wayita turetti Microsoft gadhiise